कोभिड-१९ : ट्रेसिङ, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्ट- विचार - कान्तिपुर समाचार
परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आउँदैमा कोरोना संक्रमण होइन भन्न सकिन्न । बिरामीको उपचार प्रक्रियामा नेगेटिभ नतिजा मात्रै ‘निर्णायक एकल आधार’ हुन सक्दैन ।
चैत्र २५, २०७६ डा.स्वतन्त्र गौतम, डा. भौमिक शाह
अबको चरणमा भने हामीलाई अनिवार्य रूपमा‘थ्री टी’ अर्थात् ‘ट्रेसिङ, टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट’ को दिशामा अघि बढाउनैपर्छ । शनिबार मात्रै धनगढीमा कुनै लक्षण नदेखिँदासमेत एक जनामा कोरोना पोजेटिभ नतिजा आएको छ । ‘लोकल ट्रान्समिसन’ को यो स्थिति साँच्चिकै जोखिमपूर्ण छ । भारत, मुम्बईको धराबी सुकुम्बासी बस्तीमा, (जहाँ १० लाखभन्दा बढी घरविहीन व्यक्ति बस्छन्‌), समेत कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । अब यो सलहमा लाग्न सक्ने आगलागीको अवस्थालाई कसरी आकलन गर्ने ? कसरी यो आगो रोक्ने ? यही अवस्था नेपाली गाउँठाउँ र भीडभाडयुक्त सहर–बस्तीमा देखा परेमा के गर्ने ? यो हाम्रो नियन्त्रणबाहिरको महामारी बन्ने निश्चित छ । यसकारण मुलुकका सबै प्राथमिकता अब यही स्वास्थ्य सरोकारमा केन्द्रित गर्दै तत्काल गर्नैपर्ने र हिँड्नैपर्ने बाटो हो— ‘ट्रेसिङ, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्ट’ !
-गौतम हाल मेडिकल अभ्यासमा संलग्न छन् भने शाह अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्याथोलोजिस्ट हुन् । प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०९:३६
चैत्र २५, २०७६ गौरी तमू
अहिलेकै सन्दर्भमा हेरौं, नेपालमा ‍औंलामा गन्न सकिनेबाहेक सबै नर्स महिला नैछन् । कोरोना हेल्थ डेस्कदेखि प्रदेश र संघीय हस्पिटलहरूको अग्रपंक्तिमा रहेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा महिला नर्सले काम गरिरहेका छन् । शिशुलाई स्तनपान गराउँदै गरेका वा गर्भवती महिला नर्सका समस्या केवल महिलाकै समस्याका रूपमा हेरिन्छन् । महिलालाई व्यङ्ग्य गरेर नथाक्ने ओठहरू वा हातहरूले यस्ता समस्याहरूलाई गहिरिएर कहिले बुझ्ने ? कहिले साथ दिने ?
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०९:२३